Dagaal u dhaxeeya maleeshiyo beeleed ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay Mudug | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dagaal u dhaxeeya maleeshiyo beeleed ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug...
Dagaal u dhaxeeya maleeshiyo beeleed ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay Mudug
Mudug (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya Gobolka Mudug ee Bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya maanta halkaasi inuu ka dhacay dagaal Khasaare gaystay oo u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed oo ka soo kala jeeda deegaannada Galmudug iyo Puntland.
Wararka ayaa sheegaya, in dagaalkaasi uu si gaar ah uga dhacay deegaanka Taaroge oo ka tirsan Gobolka Mudug, wuxuuna dagaalkan uu socday dhowr saacadood.
Waxaa la xaqiijiyay in saddex ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah ay ku dhinteen, halka Shan kale ay ku dhaawacmeen
Maleeshiyaadka dagaalamay, ayaa waxa ay isku haystaan dhul daaqsimeed iyo falal la xiriira dilal aanooyin qabiil ah oo horay uga dhacay deeganadaasi.
Wararka ayaa sheegaya, in dagaalka uu si iskiis ah u istaagay, waxaana jirta cabsi la xiriirta in mar kale halkaasi uu dagaal ka sii qarxo.
Waxa aheyd, isla bishan Maay gudaheeda, markii dagaal la xiriira aanooyin qabiil uu ka dhacay deegaanka Taaroge, balse Madaxweynayaasha maamullada Galmudug iyo Puntland oo khadka teleefanka kuwada hadlay ay balanqaadeen inuusan soo laaban doonin dagaalkaasi.